Hery Rajaonarimampianina : « Ny fifidianana no hametrahana Fanjakana mafy orina » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Ny fifidianana no hametrahana Fanjakana mafy orina »
Nanipy hafatra ho an’ny vahoaka ny Filohan’ny Repoblika teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny lahateny nataony nandritra ny lanonam-panaovan-tsonian’ny fifamindran-draharaha teo aminy sy ny Filoham-panjakana mpisolo toerana.
Tamin’izany indrindra no nilazany fa tokony ho sahy hijoro amin’ny fanatanterahana ny adidy masina amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao ny rehetra. “Mbola marefo sy malemy ny demokrasia nefa lalana tsy maintsy hizorantsika ny fifidianana. Ny fifidianana irery ihany no ahafahana mametraka Fanjakana mafy orina”, hoy ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.
Notsindriany tamin’izany fa lavitra no niaingana ary aoka isika ho saro-piaro amin’ireo zava- bita. Tsy tokony hiherika foana any aoriana, hoy izy, fa tokony hijery sy hibanjina ny ho avy mandrakariva. “Sahia mijoro maneho ilay safidy. Raiso ary tanteraho ny andraikitra ary asehoy ny tena fitiavan-tanindrazana satria tsy isan’andro no hiantsoana anao hanatanteraka izany”, hoy izy nanamafy.
Ankoatra izay, nanome lesona ny governemanta ihany koa ny Filoham-pirenena teo aloha, ary nilaza fa izy ireo dia tokony hijoro ho modely amin’ny fanarahan-dalàna. “Governemantan’i Madagasikara no najoro fa tsy governemantan’antoko akory. Tokony hahatsiaro ny adidy sy andraikitra goavana manoloana anareo ianareo dia ny fanatanterahana ny fifidianana. Tandrovy ny tahaka ny anakandriamaso ny filaminana sy ny fitoniana. Arovy toa ny anakandriamaso ny firaisam-pirenena…”, hoy hatrany izy.
Notsindriany hatrany fa ilaina ny fanatanterahana ny fifidianana mendrika hoentina hanamasinana amin’ny maha Andriamanjaka ny vahoaka ka hanehoany ny safidiny ao anatin’ny fahalalahana fa tsy ao anatin’ny teritery.
Tsy nohadinoin’ny Filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, kosa ny nampatsiahy fa tamin’ny alalan’ny asa sy fahatokisan’ireo mpiara-miombon’antoka sy firenena vahiny no nahafahana namerina indray an’i Madagasikara ho eo anivon’izao tontolo izao rehefa voasazy ara-diplaomatika, ara-bola, sns, nandritra ny dimy taona. Anisan’ny asa goavana natao, hoy izy, ny fampihenana ny tahan’ny fahantrana, izay 92% ny tahan’izany tamin’ny nandraisany ny fahefana ary manodidina ny 70% kosa izy ankehitriny.
Nambarany fa izany indrindra no nampirisika ny tenany hametraka fanamby dia ny hiadiana amin’ny fahantrana. “Niasa isika! ary tsy maintsy amin’ny alalan’ny asa irery ihany anefa no ahafaha-mampandroso ara-toekarena sy amin’ny lafiny rehetra ny firenena…”, hoy ny Filoha teo aloha.
Tetsy andaniny, nambarany fa zavatra tsotra no ilain’ny vahoaka amin’ny mpitondra sy mpitantana dia ny fanetren-tena manaraka ny soatoavina maha Malagasy.